July Dream: July72010
It's notayear older, butayear better...
၃ နှစ်မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပါစေ
နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ ဆက်လက်
ဘလောဂ့် သက်တမ်း ၃ နှစ်ကနေ နှစ် ၃၀ ကြာနိုင်ပါစေဗျာ
လူအတွက်ဆုတောင်းပြီးတော့ ဘလော့ဂ်အတွက်လာဆုတောင်းပေးသွားတယ်။ ဟက်ပီဘက်ဒေးပါဗျာ။ ဒီလိုပါပဲ တချို့ဆို မိန်းမရပြီးတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဘလော့ဂ်ပါ ပိတ်သွားကြတာပဲ။ အားတဲ့အချိန်ရေးပေါ့ဗျာ။
ဘလောဂ့် သက်တမ်းနဲ့ အတူ လူလည်း အဓွန့်ရှည်ပါ စေဗျာ ... ဆုတောင်းရင်း ...
happy birthday July blog..
Happy birthday July Dream! ဘလော့ဂ်ကို ဆုတောင်းတာနော့်။ လူအတွက်တော့ Facebook မှာ ဆုတောင်းပြီးပြီ။ လူမွေးနေ့မှန်းတော့ သိတယ် ဒါပေမမဲ့ ဘလော့ဂ်မွေးနေ့ဆိုတာ တကယ်ကို မေ့နေလို့ အခုမှဆုတောင်းဖြစ်တာ ဆောရီးပဲနော့်။
မွေးနေ့ရှင် blog လေးရော blgger လေးပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ.....
နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်အတွက် နောင်လည်း နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့..ပဲ ..
ကိုဂျူလိုင်ရေ မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကိုဂျူလိုင်ရဲ့ဘလော့ကို အမြဲလာဖတ်ပါတယ်။ တကယ်အကျိုးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွေးလှူတာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဖတ်ရရင်းနဲ့ သဇင်ကိုယ်တိုင် သွေးလှူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အရည်မရ အဖတ်မရ တွေက တစ်ခါတစ်လေမှာ တော်တော်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
အရည်မရ အဖတ်မရ ကြီးကို
အဲ အဲ ... စာလေး ဖတ်ပြီး ၃ နှစ်လောက် လုပ်ခဲ့ တဲ့ အားကို လည်း ချီးမွမ်းလျက် ...
မွေးနေ့ လေး အတွက်လည်း စိတ်ထဲ က ကြိတ် ဆုတောင်းပေး သွားပါတယ် ...